ဖက်ရှင် - ဘေဇီယာ | Bezzia
ဖက်ရှင် ယေဘူယျအားဖြင့်ဆိုရသော်၎င်းသည်လူအားလုံးအချိန်တိုင်းတွင် ၀ တ်စားဆင်ယင်ပုံ၊ သို့မဟုတ်ဤနယ်ပယ်ရှိလူများရရှိသည့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းနှင့်စတိုင်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့် Bezzia သည်အရောင်အမျိုးမျိုးသောအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်အမှတ်တံဆိပ်များရှိသောဤလောက၌မရှိနိုင်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးလက်ခံနိုင်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။
ငါတို့သည်လည်းမှာပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်လိမ့်မည် လမ်းဘေးကဏ္ sector ၏သတင်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလောက၏အမည်များကိုကျွန်ုပ်တို့လိုက်နာကြလိမ့်မည်၊ သင်လိုက်လျှောက်သင့်သည့်စံနမူနာများနှင့်မည်သည့်အရာများတွင်မပါ ၀ င်သောဥပမာများကိုသင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပြသမည်။
por မာရီယာ vazquez လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ရက် .
por Susana godoy လွန်ခဲ့တဲ့5ရက်ပေါင်း .
ငါတို့ကရာသီအသစ်တစ်ခုကိုရောက်နေပြီ၊ နောက်ဖက်ရှင်အဆင်တွေကိုစဉ်းစားဖို့အဲဒါနဲ့အတူ။ Zara ပုံရသည် ...
မိုးရာသီတွင်မိုးပြာရောင်အ ၀ တ်များသည်၎င်းတို့၏နေရာကိုပြန်လည်ရယူသည်
por မာရီယာ vazquez လွန်ခဲ့တဲ့5ရက်ပေါင်း .
အခြားကုမ္ပဏီများအကြားတွင် Adolfo Dominguez, Mango နှင့် Zara တို့၏ catalog များ၌သူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ဖူးသည်။ မိုးပြာရောင်စကတ်တွေလိုချင်ပုံရတယ် ...
Kara နှင့် ပူးပေါင်း၍ Zara မှဆေးတောင့်စုဆောင်းမှုအသစ်
por မာရီယာ vazquez လွန်ခဲ့တဲ့6ရက်ပေါင်း .
Zara သည်မကြာသေးမီက“ Kassl Edition” အမည်ရှိဆေးတောင့်စုဆောင်းမှုအသစ်တစ်ခုကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိလူများစွာအားထုတ်ဖော်ပြသလိမ့်မည်။
por မာရီယာ vazquez လွန်ခဲ့တဲ့ ၁ ပတ် .
ဆောင်း ဦး ရာသီနီးကပ်လာပြီဖြစ်သော်လည်းနွေရာသီမဟုတ်လျှင်သာယာသောအပူချိန်များနှင့်နေ့များစွာကျန်သေးသည်။
por မာရီယာ vazquez လွန်ခဲ့တဲ့2ရက်သတ္တပတ် .
ဆောင်း ဦး ကငါတို့ကိုဝမ်းနည်းစရာ၊ ကြားနေနဲ့အမှောင်အရောင် palette ကိုပြန်ရောက်ဖို့တွန်းအားပေးလိမ့်မယ်လို့မင်းထင်ခဲ့ရင်မင်းမှားသွားတယ်။
ဆောင်း ဦး အတွက်အညိုရောင်နှင့်မြေကြီးအရောင်ပုံစံများ
Toso ထောက်ပြသည်မှာယေဘုယျအားဖြင့်အညိုရောင်နှင့်မြေကြီးအရောင်များသည်လာမည့်ရာသီ၌ကြီးမားသောအခန်းကဏ္မှပါလိမ့်မည်။ တရားဝင်ဆိုပေမယ့် ...
Parfois သည် Back to Work နှင့်စက်တင်ဘာလကိုကြိုဆိုသည်
por မာရီယာ vazquez လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်သတ္တပတ် .
Parfois ကစက်တင်ဘာလမှာရင်ဆိုင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဟုကြေငြာသည်။ ၎င်းသည် Back To Work ထုတ်ဝေရေးအိမ်အသစ်နှင့်အတူပြုလုပ်သည်။
90 ၏ဖက်ရှင်၏တစ် ဦး ကသုံးသပ်ချက်
60 ၏ဖက်ရှင်၏တစ် ဦး ကသုံးသပ်ချက်
80 ၏ဖက်ရှင်မှတဆင့်တစ် ဦး ကလမ်းလျှောက်
50s မှဖက်ရှင်, ခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုအမြဲသတ်မှတ်သောစတိုင်